အရမ်း ဖတ်ကောင်း တဲ့ ပညာပေး စာလေး ပါ – Shwe Sar
” ရောင်ပြန် ”
( ၁ ) တစ်နေ့မှာ လူတစ်ယောက်ဟာ chattingမှာ ခင်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ချိန်းခဲ့တယ်။အဲဒီကောင်မလေးကို သူ မမြင်ဖူးသေးတော့ အရုပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေး ဖြစ်မှာ စိုးတာနဲ့သူ့ သူင ယ် ချင်း တစ်ယောက်ကို ကောင်မလေးနဲ့ တွေ့ပြီး ၁၀မိနစ် အကြာမှာသူ့ဟမ်းဖုန်းကို ဆက်ဖို့ မှာခဲ့တယ်။ ဒါမှ သူ လစ်ထွက်လို့ အဆင်ပြေမယ်လေ။
ဒီလိုနဲ့ ချိန်း ထားတဲ့ နေရာ ရောက်တော့ ကောင်မလေး ချောချော ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ဖုန်းမမြည်ပါစေနဲ့လို့ သူကျိတ်ပြီး ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ မေ မျှာ် လင့်ဘဲ ကောင်မလေးရဲ့ဖုန်းက မြည်လာတယ်။၂မိနစ်လောက် စကားပြောပြီး ကောင်မလေးက သူ့ဖက်လှည့်ပြီး “ ဆောရီးနော်…အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စ ရှိလို့ ကျွန်မကို သွားခွင့်ပြုပါဦး” တဲ့။
( ၂ ) ဝိုင်အ ရမ်းကြို က်တဲ့ သူဌေးတစ်ယောက်က ညအိပ်ယာ ဝင်တိုင်း ဝိုင်တစ်ခွက်သောက်လေ့ရှိတယ်။ အခုတစ်လော သူသောက်နေကျဝိုင်က လျော့လျော့လာလို့အိမ်က အစေခံ ခိုးေ သာ က်တယ် အထင်နဲ့ ဝိုင်ထဲကို ကျင်ငယ်ရေ ရောလိုက်တယ်။ကျင်ငယ်ရေ ရောထားလည်း ဝိုင်က လျော့နေတုန်းပဲမို့ သူဌေးက စိတ်ဆိုးပြီး အစေခံကို
ခေါ်မေး ပါတော့တယ်။ “ကျွန်တော် မခိုးသောက်ရပါဘူး” အစေခံက ငြင်းပါတယ်။ဆက်ပြီး “ သူဌေးမင်းကို ဟင်းကောင်းတွေ ချက်ကျွေးချင်လို့ ဟင်းကြော်တဲ့အချိန်ဝိုင်နည်းနည်း ထည့်မိ တာ ပါ” လို့ ဖြေပါတယ်။
( ၃ ) လူတစ်ယောက်က ဘားတစ်ခုမှာ ဘီယာသောက်နေတုန်း အပေါ့ သွားချင်လာတာနဲ့ အိမ်သာ သွားမလို့ လုပ်ရင်း သူ့ဘီယာကို တခြားလူ ခိုးသောက်မှာ စိုးတာနဲ့“ဘီယာထဲ တံထွေး ထွေးထည့်ထားတယ်” လို့ စာရေးကပ်ထားလိုက်တယ်။အပေါ့သွားပြီး ပြန်လာတော့ သူ့စာဘေးမှာ “ငါလည်း ထွေးထည့်လိုက်ပြီ” လို့
ရေးထားတဲ့ စာကို တွေ့လိုက်တယ်။သူတစ်ပါးကို ပေးတဲ့အရာက ကိုယ့်အတွက် ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ မှန်ကြည့် နေတဲ့လူတစ်ယောက်လိုပေါ့။ ကိုယ်ပြုံးရင် မှန်ထဲက လူလည်း လိုက်ပြုံးတယ်။ ကိုယ်မဲ့ရင် လိုက်မဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကဗျာဆရာ W.H.Auden က “မကောင်းတာ လုပ်တဲ့လူဟာ
မကောင်းတာကိုပဲ ပြန်ရမယ်” တဲ့။ လူတစ်ပါးကို ချောက်တွန်းရင် ကိုယ်လည်း တစ်နေ့ပြန်အတွန်းခံရမှာ မလွဲဘူး။ လူတွေကို ပျော်ရွှင်တာတွေ ပေးရင် ကိုယ်လည်းပျော်ရွှင်တာပြန်ရမယ်။
လူတွေကို ချီးကျူးရင် ကိုယ်လည်း တစ်နေ့ ပြန်အချီးကျူးခံ ရမယ်။(ဤနေရာတွင် မြှောက် ဖား ပင့် ကော်လို့ မထင်စေချင်) “သူ့ကို ပေးတာဟာနောက်တော့ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ဖြစ်သွား တ တ်တယ်”
( ၄ ) လယ်သမားတစ်ဦး စိုက်ထားတဲ့ ပြောင်းဖူးက အသီးနှံပြိုင်ပွဲမှာ နှစ်တိုင်း ဆုရတယ်။ ရတဲ့ဆုကို တစ်ခြားလယ်သမားတွေကို သူအမြဲမျှဝေခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့လူတွေက မေးေ တာ့ “ဝတ်မှုန်တွေက လေကြောင့် အရပ်လေးမျက်နှာပြန့်နေတယ်။တကယ်လို့ ကျွန်တော့်ခြံဘေးက လယ်သမားတွေဟာ မျိုးမကောင်းတဲ့ ပြောင်းဖူးကို
စိုက်ခဲ့ရင် ကျွန်တော့် စိုက်ထားတဲ့ ပြောင်း ဖူးကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်တယ်။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်တွေကို သူတို့စိုက်ခဲ့လို့ ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။ ဆုတွေက ကျွန်တော့် အတွက်ဖြစ်သလို သူတို့ အ တွ က်လည်းဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ လူတွေရဲ့ မေတ္တာကိုလိုချင်ရင် လူတွေကို မေတ္တာအရင်ထားတတ်ရမယ်။ဂရုစိုက်တာခံချင်ရင် လူတွေကို အရင်ဂ ရုစိုက်တတ် ရမယ် ။အ ရာ အားလုံးဟာ ရောင်ပြန်ဟပ်စမြဲပဲလေ..
Previous post မိဘ ကို လုပ်ကျွေးတဲ့ သားသမီးတိုင်း လက်တွေ့ ခံစားရ မယ့် အကျိုးတရား (၁၂) ပါး.
Next post ရေချိုးတုန်း ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ခြင်း မှ ကင်းဝေးစေ မည့် နည်းလမ်း